मनोरञ्जन « Janata Samachar
यी हुन् जनता टेलिभिजनमा अत्यधिक रुचाइएका कार्यक्रम
काठमाडौँ । जनता टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुतिका तीन कार्यक्रम दर्शकले अत्यधिक रुचाएका छन् । हरेक दिन दिउँसो १ बजे प्रस्तुत हुने कार्यक्रम ‘लोकमाला’, आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म साँझ ७ः३० बजे प्रसारण हुने कार्यक्रम
टुडिखेलमा तमु ल्होसारको रौनक
सरस्वती तामाङ काठमाडौ । गुरुङ समुदायले पुरानो वर्षलाई बिदा र नयाँ वर्षको स्वागतको रुपमा ‘तमु ल्होसार’ पर्व शनिबार धुमधामसँग मनाएका छन् । यस वर्ष च्यहल्हो (चरा वर्ग) लाई विदा गरी
‘झमक बहादुर’ को रिमिक्स गीत ‘आमैले भन्थे धाराको पानी सार्वजनिक (भिडियोसहित)
काठमाडौं । चलचित्र ‘झमक बहादुर’को रिमिक्सि गीत ‘आमैले भन्थे धाराको पानी…’ सार्वजनिक भएको छ । राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य उत्तम केसीले गीत सार्वजनिक गरेका हुन् । ‘आमैले
आज क्रिसमस डे, नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै
काठमाडौं । क्रिश्चियन धर्मका संस्थापक येशु ख्रिष्टको जन्मोत्सव २५ डिसेम्बरका दिन गिर्जाघरहरुमा विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदैछ । दुई हजार वर्षअघि जेरुसेलमको बेथलेहममा कन्या मारियमको कोखबाट येशुको जन्म भएको थियो
नायिका रेखा थापा ‘छोरीका निम्ति स्वर्णिम नेपाल महाअभियान’ तिर
बाँके । ‘छोरीका निम्ति स्वर्णिम नेपाल महाअभियान’ अन्तर्गत बाल विवाह अन्त्य संकल्प बाँके जिल्लामा पनि शुक्रबारदेखि शुरु गरिएको छ । कलाकारद्वय नायिका रेखा थापा र नरबहादुर कार्कीको अगुवाइमा थालिएको अभियानलाई
केकीको नोटमा लालबाबुको अटोग्राफ !
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा निर्वाचीत भएपछि यतिबेला नेकपा एमालेका नेता लालबाबु पण्डितको चर्चा निकै चुलिएको छ । धेरैको नजरमा पर्न सफल नेता पण्डित अभिनेत्री केकी अधिकारीको फेभरेट लिडर समेत रहेछन्
सरोज दत्तको ‘कालो बादल’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
काठमाडौं । गायक सरोज दत्तको स्वरमा रहेको गीत ‘कालो बादल’ बोलको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । ‘जुनी जुनीलाई’, ‘दिन ढल्यो रात बित्यो’, ‘ओठदेखि’, ‘चरी उड्यो आकाश मै भरर’ र
महानायक हमाल ओलीलाई भेट्न किन पुगे बालकोट ?
भक्तपुर । वाम गठबन्धनले निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याएकोमा त्यसका नेतृत्वकर्ता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई महानायक राजेश हमालले बधाई दिएका छन् । हमालले आगामी सरकारको नेतृत्व गरेर देशलाई स्थिरता,
बलिउड सुन्दरी मालाको प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने नेपाली गायक
जीवनको ८ दशक पार गरिसक्दा समय फेरिए, अनेक व्यवस्था परिवर्तन भए तर प्रेमध्वजको स्वभाव कहिल्यै फेरिएन । बाल्यकालदेखि नै शान्त र लजालु उनको स्वभाव अहिलेसम्म जस्ताको तस्तै छ । प्रेमध्वज
एजेन्सी । बलिउडका चर्चित अभिनेता शशी कपुरको सोमबार ७९ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । अभिनेता, निर्माता र निर्देशकका रूपमा प्रख्यात कपुरको स्वास्थ्यमा केही समयदेखि समस्या देखिएको थियो । उनले